သာယာတင့်တယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » သာယာတင့်တယ်
Posted by panpan on Jun 19, 2013 in Environment | 27 comments
နေ့လည်ထမင်းစားပြီးရုံးပေါ်ပြန်အတက် လမ်းမှာဓားမရောင်းတဲ့လူရယ်၊ ဘေးမှာလူတစ်ယောက်ရယ် ထိုင်နေတဲ့နားကဖြတ်အသွား၊ သူတို့ပြောနေတာနားစွန်နားစကြားလိုက်ရတယ်။
“အရင်တုန်းကတစ်နေ့လုံးမှ၇၀၀၊ ၈၀၀၊ ၁၀၀၀ပဲရတာ၊ လျှောက်ရတာနေပူစပ်ခါးကြီး၊ ဘယ်လိုလုပ်စားရမလဲ”
ခုတလော လမ်းချဲ့၊ ပလက်ဖောင်းပြင်တော့ လမ်းလျှောက်ရတာ ကပ်သီးကပ်သပ်ရယ်။
ဖိနပ်မပါခြေဗလာနဲ့မြေတူးနေတာ၊ သေချာထပ်ကြည့်မိတော့ အလို၊ အောက်မှခဲလုံးတွေ ခဲလုံးတွေ။ ချွန်တာတွေရော လုံးတာတွေရော။ သူတို့ခြေဖ၀ါး မနာရှိရိုးလား။ လက်ကလည်း ပေါက်တူးကိုင်ပြီးပေါက်နေရတယ်။
ရုံးရှေ့လမ်းဘေးရောင်းတဲ့မုန့်တီအထမ်းသည်။ အိမ်မှာဟင်းရည်အိုးချက်မလာ။ ရောင်းတဲ့နေရာရောက်မှ ကပ်သီးကပ်သပ်ချက်တယ်။ ဆေးကြောဖို့ရေလုံလောက်ပါ့မလား။
လှီးတဲ့ဓားနဲ့ စဉ်းနှီတုံးကဆေးလည်းမဆေး၊ ထည့်မည့်အမယ်တွေကိုရော။ ဘုရား ဘုရား ရွှံ့အထပ်ထပ်ပေနေတဲ့ ထိုင်ခုံတွေကိုအပေါ်ဆုံးမှာတင်လာတယ်။ အောက်မှာစားမယ့်ပန်းကန်တွေ၊ ပိုဆိုးတာက အောက်မှနံနံပင်တွေ၊ ငရုပ်သီးတွေ၊ ဘာတွေ ညာတွေ။ တနေ့က၀ယ်စားလိုက်မိပြီ။
ရုံးဆင်းချိန်ဆိုတော့ ဒီလိုပဲကားကျပ်တာပါပဲ။ အထူးကားတွေကလည်း မတ်တပ်ရပ်ရရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တင်ပါးပွတ်တာနဲ့ ရင်ဘတ်ထိတာနဲ့။ ထိုင်ရတဲ့လူကရော၊ ဒူးကကျပ်သေး၊ အစွန်ကလူက ဖင်တခြမ်းစာနေရာကိုခြေတစ်ချောင်းထောက်ပြီး တင်းခံနေရတာမျိုး။ ကားရဲ့အကျယ်အ၀န်း၊ ပြတင်းပေါက်တွေကရတဲ့လေ၊ အထဲရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့ရှုမယ့်နှာခေါင်းတွေ။ လေမလုံလောက်ပါလား။ လမ်းပေါ်မှာကားတွေကလည်းထူထပ်လာလိုက်တာ ၀င်လာတဲ့လေကလည်း မလတ်ဆတ်ပါဘူး။ အဲ့ထဲတခါတခါအတွင်းလေကလည်း ညစ်တစ်တစ်။
ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ မသက်သာလိုက်တာ ပန် ကလေးရယ်။
မမဆွိ ပြန်လာရင် ဘတ်စ်ကားကို တစ်ရက်လောက်ပတ်စီးကြည့်ပါလ်ို့အကြံပေးပါရစေ
ကျွန်တော်သာ မနက် ကြက်ဥနှလုံးစားမှ ဗိုက်မဆာတက်တာ… မနက်မိုးလင်း တီးခွက်တ၀က်နဲ့ဗိုက်ဖြည့်ထားရတဲ့သူ တပုံကြီး…..
ကျွန်တော်သာ ထမင်းစားရင် ဟင်းနဲရင်ဖြစ်တယ် အချဉ်အစပ်အရည် မစုံရင် မစားဖြစ်တာ… ဘဲဥတခြမ်းနဲ့ဆီမပါဆားမပါ စားရတဲ့သူ တပုံကြီး…..
ကျွန်တော်သာ ခြင်ကိုက်ရင် မအိပ်တက်လို့တခါတလေ ခြင်ဆေးထွန်း ခြင်ထောင် သေချာချအိပ်တာ… အိပ်စရာနေရာ မရှိလို့ဖြစ်သလို အိပ်ရတဲ့သူ တပုံကြီး…..
နောက်ဆုံးတော့လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြသာနာ ခေါင်ချုပ်က ဆင်းရဲမွဲတေမှူပါပဲ……..
မနက်စာ ကော်ဖီမစ်၁ထုပ်ကို၂ခွက်ကျဲကျဲဖျော်၊ အီကြာကွေးတစ်ချောင်းကို သားအမိ၃ယောက်စားတာတော့ တွေ့ဖူးပါတယ်
ထမင်းကို ဟင်းနဲ့မစားတတ်၊ (ဘဲဥနဲ့တောင်မစားတတ်) စားနေကျငပိရည်နဲ့ပဲစားတတ်တဲ့ကလေးတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်
ညရောက်ရင် ရန်ကုန်မြို့တစ်နေရာရာက တိုက်လှေကားထစ်၊ ဆိပ်ကမ်း စသည်စသည် အိပ်စရာနေရာရှာနေရတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်
အောက်ကစာက ခြစ်လှဇွာသော ရဲရဲတောက် ဘလပ်ဒီးကဘုန်းကျော် စာမျက်ခွက်ကနေ မ-လာဒါ….
ဆဲချင် သများ ကို မဆဲနဲ့ သူ့ပေ့ခ်ျသွားဆဲဂျ..။
သများက သတ္တိမစိလို့ ကန္နား စီးနေတာ ..သတ္တိစိရင် အဟွာစီးမှာပေါ့..
(အဟွာ = ကား)
နောက်ထပ်ကျွေးရတဲ့ လူတွေကတော့ သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့သံဃာ။ အရေအတွက်အားဖြင့် လေးသိန်းနီးနီး။ သီလရှင်ပါ ထပ်ပေါင်းတော့ ငါးသိန်း။ ဒီအင်အားကလည်း စစ်သားတွေလို သူများကျွေးမှ စားရတာဆိုတော့ ဆန်ကုန်မြေလေးတွေပဲ။
စစ်သားနဲ့ ရဲ ဖြစ်ဖို့ က သင်တန်းလိုတယ်။ စနစ်တကျလက်ခံပြီးမှ လုပ်လို့ ရတယ်။ ဘုန်းကြီးက ၀င်ချင်သလိုဝင်ထွက်ချင်သလိုထွက်လို့ ရတယ်။ အများဆုံး မိနစ်ငါးဆယ်လောက်ရင်းလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် အလကားရတာလည်း စားရတယ်။ ကန်တော့လည်းခံရတယ်။ ဘုန်းကြီး ဦးရေနဲ့ စစ်သားဦးရေ ဒီလောက်များတော့တိုင်းပြည်က ၀ါးတီးများများပေးပြီး အရည်မရအဖတ်မရတွေများလာတယ်။ ဆင်းရဲလာတယ်။
လူဦးရေအားဖြင့် သန်းခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးအရေအတွက်နဲ့ စစ်သားအရည်အတွက်က မြန်မာလောက်မများဘူး။ သိရိလင်္ကာနိုင်ငံလည်း အလားတူ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်ဖို့ အတွက်စစ်သားနဲ့ ဘုန်းကြီးဦးရေကို ကန့် သတ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါတွေက အရေအတွက်များပြီး ပြည်သူဝန်ပိတယ်။ ဒါနဲ့ တဆက်တည်း အလုပ်မဲ့လာတယ်။ အလုပ်မဲ့လာတော့ အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာတဲ့လူတွေပေါလာတယ်။ သောက်ပြသနာရှာလာတယ်။ ဦးဝိရသူတို့ လိုအုပ်စုကတော့ အလုပ်မရှိလို့ဒီလိုဖြစ်လာပဲ။ အားနေတော့ သောက်ပြသနာရှာတာပေါ့။ လူထွက်ပြီး စပါးစိုက်ဖို့ ၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ လည်း လက်ကြောမတင်းတော့ သင်္ကန်းနဲ့ ယူနီဖောင်းကို ခုတုန်းလုပ် ပြည်သူ့ လူထုကို ဆရာလုပ်၊ ဒီလိုလူတစ်စုကြောင့် တိုင်းပြည်မတိုးတက်တာလို့ ပြောရင်မလွန်ပါဘူး။
ရွှေည၀ါဆရာတော်အသံကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ သူ့ ပဲကြောက်ရတော့မဲ့အသံနဲ့ ။ ဟောက်စား
ပင်နယံ၊ ခွေးသွားစိတ်တွေချည်းပဲရှိလို့ မခုတ်မောင်းနိုင်ပါဘူး
လောင်စာ၊ ပင်နယံ၊ ချောဆီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်စသဖြင့်ပေါ့
တွေ တောင်လခနည်းလို့မလုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး ပျော်နေ
အလုပ်လုပ်ချင်ပေမယ့် လုပ်စရာအလုပ်မရှိဘူးဆိုတော့ ကျိန်စာအတိုက်ခံရလို့နဲ့တူတယ်
အင်းဖတ်ရတာစိတ်မချမ်းသာ။ မြင်ကြည့်တာစိတ်မချမ်းသာ။ ဘယ်ဟာမှစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်း ဘူးပေးကလန်ရေ့။ အမလဲအခုတလော အပြင်ထွက်များနေလို့ပြန်လာရင် နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြော စရာပါပါလာတာပဲ။ စိတ်မချမ်းသာစရာတွေ။ Taxi စီးလဲ စိတ်မချမ်းသာစရာပဲကြားရ။ ဘတ်စ်ကားစီးလဲ စိတ်မချမ်းသာရချည်းပါပဲအေ။ အခုတော့ အိမ်ရောက်မှပဲစားတော့တယ်။ အပြင်မှဝယ်မစားတော့ဘူး။ ဘယ်လောက်ဗိုက်ဆာဆာ အိမ်အထိရောက်အောင်ပဲပြန်တော့တယ် ပေးကလန်ရေ။
ဘဝဟူသမျှ ဒုက္ခချည်းဘဲလေ ဒဂါမဂျီးရဲ့
ဒုက္ခသစ္စာ ကျောမွဲများကို ရှူ့တတ်ရင်တရားရ…
ပန်ပန်ရဲ့ ပိုစ့်ဖတ်ပြီး တစ်ခါသုံးအောက်စီဂျင်ဗူးတွေ ရေသန့်ဘူးရောင်းသလို ရောင်းလာကြရင်ကောင်းမလား လို့ အတွေးဝင်မိပါတယ်ဗျ။
ရန်ကုန်မြို့ မှာ အကြာကြီး မနေနိုင်တာ အဲဒါတွေကြောင့်ပေါ့ ပန်ပန်ညီမငယ်ရေ
ပန်ပန့်စာကို ဖတ်ပြီး အိနြ္ဒိယ၀တ္ထုကို မြန်မာပြန်ထားတဲ့ သုခဘုံ ဆိုတာလေးကို သွားသတိရမိတယ်။ :buu:
သုခဘုံဆိုတော့ ခုရန်ကုန်နဲ့တော့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေမလားပဲ
မဟုတ်ဘူး ကိုချိုကြီးရေ…ဆရာ မြသန်းတင့် ပါ ခင်ဗျာ…
ဒေါမနစ် လာပိုင်ရားရီ ရဲ့ စီတီးအော့ဖ် ဂျွိုင်း ကို ဘာသာပြန်
သုခဘုံတော့ မသိဘူး..ဆရာ မြသန်းတင့်ရဲ့ သုခမြို့တော်တော့ သိတယ်
အန်တီ မမ ရေ..။
ဖတ်ဖူးတာ ကြာပြီမို့ သုခ ပါတာပဲ မှတ်မိတယ်။
ဘုံ လား မြို့တော်လား ဆိုတာ မသေချာပဲ ထင်သလို ရေးလိုက်မိတာပါ။
ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်နည်းနည်းလေးထဲကမှ တစ်သက်လုံးစိတ်ထဲစွဲအောင် မှတ်မိနေတဲ့ စာအုပ်ပါ။
ဘာသာပြန်စာအုပ်အကြောင်းရေးရင် မောင်ဘလှိုင်ရောက်လာမယ်လို့တော့ ထင်မိသား။
ခုလို စာအုပ်နာမည်အမှန်ကို သိရတာ ဒီလိုဆရာတွေ ရှိနေလို့သာပေ့ါ။
မသဲနုရေ အဆာခံပီး အစာအိမ်ဖြစ်မှာလည်းစိုးရ၊ အပြင်စာစားတော့လည်း အစာအိမ်ဖြစ်မှာစိုးရ မသက်သာပါဘူး
ကပေရေ ကပေတို့မန်းလေးကတော့ ရန်ကုန်ထက်နည်းနည်းပူတာကလွဲလို့ နေလို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ
ပီးဒေါ့ မန်းသူညိုညက်ချော လုံးကြီးပေါက်လှဒွေလည်းချိဒယ် :528:
အေးဟယ် ပန်ပန်ရယ်… ညည်း ပို.စ်ဖတ်ရတာ ဘက်စ်ကား တကယ်စီးလိုက်ရသလိုပါပဲအေ…
ပြီးတော့ရှိသေးတယ်လေ.. အဲဒီဒုက္ခက ဒို. တရပ် ထဲသားတွေပဲ သိတာနော…..ရူးတိုးတိုး ဘူ.မှ ကျောကျနဲ. တိယား.. ခိခိခိ
အိုက်ဒါကျောင့် ကို့ဘွကို ဆိုးလှဘီထင်ရင် ကို့ထက်အဖြစ်ဆိုးတဲ့လူကြည့်
ကို့ဘွကို မြင့်လှဘီထင်ရင် ကို့ထက် သာယာတဲ့ဘွက လူတေကိုကြည့်ပြီး ……………………….
မချွေအိ(ကျိပျား)က မဇ္ဈိမလမ်းစဉ်အတိုင်း ကျင့်ကြံပီးတရားရလို့ တသက်လုံးဘွားသီလလုပ်သွားလေသဒီးးး
ကြုံတွေ့ နေရတဲ့အဖြစ်တွေထဲမှာ…လိုင်းကားတိုးစီးရတဲ့အဖြစ် …ဆိုးဝါးတာကိုတော့..